यसरी हुन्थ्याे विमानस्थलबाट सुन तस्करी (अभियुक्तहरुकाे सनसनीपूर्ण बयानसहित) | mulkhabar.com
यसरी हुन्थ्याे विमानस्थलबाट सुन तस्करी (अभियुक्तहरुकाे सनसनीपूर्ण बयानसहित)
May 4, 2018 | 8:01 am 214 Hits
काठमाडौँ , २१ बैसाख —
तस्करको समूहले विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा कार्यरत कर्मचारी, लोडर र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा कसरी गुपचुप अवैध स्वर्ण धन्दा चलिरहेको थियो भन्ने प्रतिवादीहरूको बयानबाट खुलेको देखिन्छ । संगठित तस्करको समूहले फ्लाई दुबई र थाई एयरलाइन्समार्फत दुबईबाट सुन ओसारेको तथ्य अनुसन्धानले देखाएको छ । दुबईबाट आउने सुन मुख्यतस् दुई तरिकाले विमानस्थलबाट बाहिरिने गरेको देखिन्छ ।
पहिलो तरिका बिस्कुट आकारको सुन विमानभित्रको ट्वाइलेटमा हाल्ने र फ्लस गर्ने । उक्त सुन विमान ल्यान्ड भएपछि सफाइ मजदुरका रूपमा जाने कर्मचारीले ट्वाइलेटको दिसापिसाब जाने पाइप खोलेर दिसापिसाब सफा गर्ने भाँडामा राखेर बाहिर ल्याउने । दोस्रो तरिका भनेको विमानभित्र झोलामा राखेर ल्याइएको सुन विमानबाट ओर्लिने क्रममा प्रयोग हुने भर्‍याङयुक्त गाडी ९र्‍याम० को माथिल्लो भागमा बनाएको प्वालभित्र खसाल्ने । यसरी खसालिएको सुन भर्‍याङको तल्लो भागमा गएर जम्मा हुन्थ्यो । यात्रु ओर्लिसकेपछि भर्‍याङयुक्त गाडी ९र्‍याम० पार्किङमा लगिन्थ्यो । सीसीटीभीको कभरेज नहुने उक्त क्षेत्रमा राति भर्‍याङबाट सुन निकालेर बाहिर निकालिन्थ्यो ।
बयानका क्रममा थाई एयरलाइन्समा कार्यरत कर्मचारी हेमन्त मल्लले अवैध सुन कसरी विमानस्थल बाहिर ल्याइन्थ्यो भन्ने बताएका छन् । उनले थाई एयरको विमान काठमाडौं अवतरण गरेपछि एलबी भन्ने लालबहादुर मगरले यात्रु उत्रने भर्‍याङयुक्त गाडी विमानको ढोकामा जोड्ने र यात्रु उत्रिसकेपछि दोराम खत्रीले विमानभित्रको शौचालयको डस्टबिनमा राखिएको सुन ल्याउने गरेको बताएका छन् । मल्लले भनेका छन्, ‘भुजुङ गुरुङलगायतले ल्याएको सुन दोरामले यात्रु झर्ने भर्‍याङको छेउमा बनाएको प्वालबाट भित्र खसाल्थे । म र बालकृष्ण श्रेष्ठले यसरी सुन छिराएको अरूले देख्लान् भनेर छेक्ने गर्थ्यौं । गोपालकुमार श्रेष्ठ र वीरेन्द्रमान श्रेष्ठले यात्रुको आवतजावत व्यवस्थापन गरेर अरूले थाहा नपाउने वातावरण बनाउँथे ।’
प्रहरीले विमानस्थलभित्र काम गर्ने थाई एअरलाइन्स र नेपाल एअरलाइन्सका १३ कर्मचारीविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको छ । त्यसमा अधिकांश लोडर, हेल्पर, टेक्निकल असिस्टेन्टजस्ता तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारी छन् । राजन, हेमन्त र सम्बिरको भनाइले विमानस्थलबाट कसरी संगठित तबरले बारम्बार सुन बाहिरिने गथ्र्यो र त्यसको परिमाण कति रहन्थ्यो भन्ने बुझाउँछ ।
को हुन फरार भनिएकाहरू ?
तस्करीको सुन अनुसन्धान गर्न बनेको विशेष समितिले सुनका मुख्य कारोबारी भनिएका गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीसहित ३४ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएको छ जसमा दुबई बस्ने गोरेकी श्रीमती नर्वदा खरेल उप्रेती, सुन तस्करीमा सहयोगीको भूमिका खेल्ने गोरेकी भाइबुहारी दुर्गा खरेल, भाइ रमेश उप्रेती, बाबु डोलेन्द्र खरेल छन् । सुन ओसारपसारमा संग्लन रहेका कृष्ण बस्नेत, मोहम्मद उस्ताद मियाँ, कमल कार्की, रोहित आचार्य, भोजराज भण्डारी, दुबई बस्ने सन्दीप खड्गा, अनामनगरस्थित गोरेको गोप्य अफिसमा काम गर्ने भविन राई र गोरेकी प्रेमिका भनिएकी रक्षा भण्डारीलाई पनि फरार प्रतिवादी बनाइएको छ ।
तस्करीको सुनमा विभिन्न व्यापारीको लगानी रहेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ । विशेष समितिले बाजेको सेकुवा नामक चेन फुड रेस्टुरेन्टका सञ्चालक चेतन भण्डारी, दरबारमार्गमा सुन पसल सञ्चालन गर्ने सुनील अग्रवाल र लक्ष्मी गोल्ड प्यालेसका प्रमोद श्रेष्ठलाई पनि फरार प्रतिवादी बनाएको छ । प्रमोद अघिल्लो साढे ३३ किलो तस्करीको सुनमा पनि प्रतिवादी बनेका थिए । प्रमोद २०७४ जेठ ३० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सात लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
भेटिएला सम्पत्ति ?
संगठित सुन तस्करीमा संग्लनहरूले अवैध आर्जन कहाँ लगानी गर्छन् रु अनुसन्धान अधिकारीका निम्तिसमेत यो प्रश्न टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । बैंक च्यानलको कमै प्रयोग गर्ने तस्करहरूले तस्करीको कमाइ विभिन्न व्यक्तिका नाममा लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । तर त्यसको अकाट्य प्रमाण नभेटिने हुँदा तस्करहरूको अकुत आर्जनको पाटो प्रमाणित हुन जटिल हुने गरेको यसअघिका घटनाले देखाउँछन् । जस्तो कि, साढे ३३ किलोभन्दा धेरै सुन तस्करीको घटनामा मुछिएका एसएसपी श्याम खत्रीको बैंक विवरण मगाउँदा अनुसन्धान अधिकारी नै छक्क परेका थिए । खत्रीको बैंक खातामा त्यतिबेला जम्मा केही लाख रुपैयाँ मात्रै देखिएको थियो भने उनले असनका साडी कुर्ताका एक मारवाडी व्यापारीलाई ३ प्रतिशतका दरले १७ लाख रुपैयाँ ब्याजमा दिएको पत्तो पाएको थियो । तर ब्याजमा दिएको उक्त रकमबारे कागजी प्रमाण प्रहरीले फेला नपारेपछि अकुत सम्पत्ति आर्जनको विषयले मुद्दामा प्रवेश पाएन ।
संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धानमा संग्लन प्रहरी अधिकारी अवैध च्यानल प्रयोग गरेर हुने पैसाको लेनदेनको कागजी प्रमाण नभेटिँदा मुद्दा कमजोर हुने गरेको बताउँछन् । चलाख र प्रमाण लुकाउन खप्पिस यस्ता तस्कर समूहले आम्दानीको हिस्सा आफ्ना नाममा नभई विभिन्न व्यक्तिमार्फत लगानी गरेको देखिन्छ जसलाई कागजी प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्न जटिल हुने गरेको छ ।
अनुसन्धान समितिले तस्करीको सुनमा लगानी गरेका भनिएका राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता भुजुङ गुरुङको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति जाँच गरेको छ । भुजुङले एउटै बैंकमा विभिन्न ५ खाता खोलेको पाइएको छ जसमध्ये चार खातामा चार करोड २१ लाख ५० हजार तीन सय ८२ रुपैयाँ देखिएको छ ।
तस्करीको पुरानै समूह
२०७३ पुस २१ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विमानस्थलको भन्सार हुँदै बाहिरिएको साढे ३३ किलोभन्दा बढी सुन विमानस्थलको गोल्डेनगेट कटेपछि बरामद गरेको थियो ।
उक्त सुन तस्करीमा ब्युरोले फरार अभियुक्तका रूपमा प्रतिवादी बनाएकाहरू नै पछिल्लो ३३ केजी सुन तस्करीमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा संग्लन भएको भेटिएको छ । अघिल्लो सुन तस्करीमा विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका एसएसपी श्याम खत्रीले विमानस्थलबाहिर निकाल्न सहयोग गरेका थिए । पछिल्लो सुन पनि एसएसपी खत्रीले आफ्ना चालक विष्णु खडकालाई भनेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्‍याउन मद्दत गरेको देखिन्छ ।
अघिल्लो घटनामा सुन तस्करहरूले विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन दरबारमार्गमा रहेको दरबार दोहोरी साँझमा लगेर बुझाएको र त्यहींबाट अन्यत्र पुर्‍याइएको तथ्य बाहिर आएको थियो । पछिल्लो तस्करीको घटनामा पनि विभिन्न स्थानमा राख्दै दरबार दोहोरीमै पुर्‍याइएको देखिन्छ ।
अघिल्लो सुन तस्करीमा दरबार दोहोरीमा रामहरि कार्कीले सुन व्यवस्थापनको काम गरेको देखिन्छ भने यो तस्करीमा पनि उनैको नाम प्रतिवादीहरूले पोलेका छन् । विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन कहाँ–कहाँ पुग्थ्यो भन्ने बताउने क्रममा प्रतिवादी मोहन काफ्लेले बयानमा भनेका छन्, ‘विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन भोजराज भण्डारी र चुडामणि उप्रेतीले दरबार दोहोरीमा लगेर हरि खडकाको मान्छे रामहरि कार्कीलाई बुझाउँथे ।’
तस्करीको सुन किनेको आरोपमा प्रतिवादी बनेका आरके ज्वेलर्सका राजेन्द्रमान शाक्य पछिल्लो सुन तस्करीमा पनि प्रतिवादी बनेका छन् । यी दुवै घटनाका प्रतिवादीको बयान हेर्दा दुबईबाट आएको सुनको एउटा हिस्सा राजेन्द्रले किन्ने गरेको देखिन्छ । दरबारमार्गमा रहेको दरबार दोहोरीबाट शाक्यले सुन लिने गरेको प्रतिवादीहरूले बयानका क्रममा बताएका छन् । शाक्य तिनै सुन व्यापारी हुन, जो अघिल्लो साढे ३३ केजी सुनको मुद्दामा डेढ लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका थिए । त्यतिबेला साढे ३३ किलो सुन बरामद भएलगत्तै फरार भएका शाक्य कोलकातामा बसेका थिए । उनी घटनाको चार महिनापछि सुटुक्क जिल्ला अदालतमा हाजिर भई धरौटी बुझाएर मुक्त भएका थिए ।
अघिल्लो सुन तस्करीको घटनामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गोल्ड प्यालेसका प्रमोद श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी प्रतिवादीका रूपमा अदालतमा पेस गरेको थियो । ब्युरोले प्रमोद तस्करीको सुन किनबेचमा संग्लन रहेको आरोप लगाएको थियो । २०७४ जेठ ३० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सात लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी छुटेका थिए ।
दुबईबाट पटक–पटक सुन ओसारें– टेकराज मल्ल
न्युरोडको पार्किङमा काम गर्दागर्दै म बेनु श्रेष्ठको सुन पसलमा कामदार भएँ । बेनु र चुडामणिबीच कुरा हुँदा चुडामणिले भाइ दुबई जाने हो भन्दै ‘१०–१५ दिन दुबई बसेर फर्किने हो, राम्रो काम छ । कमाइ राम्रो हुन्छ’ भन्ने आस देखाए । त्यसको तीन महिनापछि म पासपोर्ट बनाएर दुबई गएँ । फर्किंदा शिवानी खरेल नामकी केटीले ४ केजी सुन भएको झोला दिइन् । उनले विमानभित्र के गर्ने, के नगर्ने भनेर सिकाइन् । मैले सुन ल्याएर एयरपोर्टमा आएपछि उक्त झोला सानु बन ९विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी० लाई दिएँ । सोही दिउँसो बेनुले मलाई ६० हजार रुपैयाँ दियो । त्यसको तीन दिनपछि पनि म दुबई गएँ । फर्किने बेलामा चुडामणिले ५ केजी सुनसहितको झोला दिएर एयरपोर्टमा ल्याएर छोडिदिए । उक्त सुन पनि मैले सानु बनलाई नै दिएँ । त्यसपछि पनि कहिले ७ केजी, कहिले ८ केजी सुन ल्याइदिएँ । एकचोटि सबैभन्दा धेरै १६ केजी सुन ल्याइदिएँ । पछिल्लो पटक गत माघ ९ गते म र रोहित आचार्य दुबईबाट ल्याएको ३३ केजी सुन सधैं झैं एयरपोर्टमा ल्याएर सानु बनको जिम्मा लगाएर घर गएका थियौं ।
(बयानको सम्पादित अंश)
यसरी ल्याउँथ्यौं सुन – मोहन काफ्ले
मैले सुरुमा १५ दिनजति चुडामणि उप्रेतीको सवारीचालक भएर काम गरेँ । पछि उनले एयरपोर्टको काम हेर भनेर जिम्मा लगाइदिए । सुन ल्याउने व्यक्ति एयरपोर्टको भित्री गेटबाट बाहिर निस्केपछि चुडामणि सुन ल्याउने व्यक्तिको फोटो र हुलिया मोबाइलमा पठाइदिन्थे । म र भोजराज भण्डारीले सोही आधारमा कालो झोलामा सुन बोकेर बाहिरिने मान्छेबाट सुन बुझेर ट्याक्सीमा राखी भित्री गेटबाट बाहिर निकाल्थ्यौं । अनि चुडामणिले सुन ल्याउनेलाई दिने भनेको रकम थमाइदिन्थ्यौं ।
हामी भने सुनसहित भोजराजको कोठामा पुग्थ्यौं, चाइनिज क्यासकेटभित्र भएको सुन निकाल्थ्यौं । सो सुनबारे चुडामणिलाई जानकारी गराएपछि उनीहरूले आधा सुन लगेर बानेश्वरस्थित प्रमोद श्रेष्ठको घरमा बुझाउँथे । बाँकी सुन म, भोजराज र चुडामणिले दरबार दोहोरीमा लगेर हरि खडकाको मान्छे रामहरि कार्कीलाई बुझाउँथ्यौं ।
यसरी सुनको कारोबार गथ्र्यौं- भुजुङ गुरुङ
२०४० सालतिर नै मैले थाई एयरमार्फत सुन ल्याएर काठमाडौंका सुन पसलमा बेच्ने काम गर्थें । २०६९ देखि म चुणामणि उप्रेतीसँग जोडिएँ । मोहन अग्रवाल, छिरिङ वाङ्गेल लगायतका साथी मिलेर सुन तस्करीको योजना बनायौं । मैले गोपालकुमार श्रेष्ठसँग सल्लाह गर्दा उनले प्लेनको ट्वाईलेटको फोहोर फाल्ने डस्टविनमा सुन लुकाउने, थाई एअरवेजमा सरसफाईको काम गर्ने कर्मचारीमार्फत बाहिर निकाल्न सकिने र विमानको ग्यारेजमार्फत विमानस्थल बाहिर निकाल्न सकिने योजना बन्यो । सुन तस्करी गर्ने क्रममा मोहनकुमार अग्रवाल र उनका तीन दाजुभाई, पवन अग्रवाल, दरबारमार्गका सुन पसले राजेन्द्र शाक्य पनि कारोवारमा संग्लन थिए ।
मोहनकुमार अग्रवालले सुन किन्ने पैसाको व्यवस्था गर्थे । हामीले बैंकक र दुबईमा रहेका नेपालीका आफन्तलाई नेपालमै रकम दिन्थ्यौं र उक्त पैसाको सोधभर्ना उता संकलन गथ्र्यौं । यसरी जम्मा गरेको पैसा सुन किन्न खर्च गथ्र्यौ । प्रत्येक पटकको सुन तस्करीबापत मैले ४० हजार पाउथें जसबाट प्रतिकिलो ५ हजारका दरले मैले राखेर बाँकी रकम गोपालकुमार श्रेष्ठलाई दिने गरेको थिएँ । प्रत्येक महिना ४ देखि १० पटकसम्म सुन तस्करी गर्थ्यौं ।
यसरी सुन काठमाडौंबाट अन्त पुर्‍याउथें – कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की
उर्लाबारीतिर ट्याक्सी चलाउने काम गर्थें । २०७२ मंसिरतिर चुडामणि उप्रेतीसँग चिनजान भयो ।
उनले सुन ओर्साने काम गर सुरुमा महिनाको ४० हजार दिन्छु, सुन पुर्वतिर पुर्‍याएपछि एक पटकको २५ हजार दिन्छु भनेपछि मैले काम थालें । एकपटक उप्रेतीले चार केजी सुन गाडीको ढोकाको चेपमा राखिदिए । उनले भनेअनुसार मैले धरान पुगेर उक्त सुन सुनिल अग्रवाललाई जिम्मा दिएँ । विभिन्नपटक उप्रेतीले भनेबमोजिम सुन पुऱ्याउन पुर्वका विभिन्न ठाउँ पुग्थे । सुन हराएपछि सनम शाक्य, मोहन काफ्लेसहित मलाई पनि विभिन्न पटक अनेक ठाउँ पुर्‍याएर कुटपिट गरियो । शाक्यको हत्याअघि हामी तीनै जनालाई रुखमा बाधेर कुटपिट गरिएको थियो ।
(गाडी चालक नरेन्द्रको बयानको सम्पादित अंश)
को थिए मृतक शाक्य ?
अदालतमा पेश गरिएको अभियोगपत्रमा मृतक सनम शाक्यका दाई संजिप शाक्यको पनि बयान समेटिएको छ । संजिपले आफ्नो भाइ तीन बर्ष अघि गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीसँग काम गर्छु भनेर काठमाडौं गएर बसेको बताएका छन् । सुन हराएपछि गोरेले बारम्बार सनमलाई फोन गरेर परिवारलाई नै सखाप पारिदिने धम्की दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उप्रेतीले फोन गरी १० मिनेटभित्र मलाई भेटन आईज नत्र जे पनि हुन सक्छ भन्दै धम्की दिएको कुरा पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिवादीहरुले बयानका क्रममा सनमले काठमाडौंमा बसी तस्करीको सुन सम्बन्धी हिसाबकिताबको काम गर्ने गरेको बताएका छन् । सुन हराएसँगै आफ्नो समुहसँग सल्लाह नगरी हिडेको भन्दै सनममाथि गोरेले शंका गरेको देखिन्छ । सुन पत्ता लगाउने क्रममा गोरेको समुहले विभिन्न समयक्रममा समुहका सदस्यहरुलाई यातना दिने र कुरा बकाउने नीति अख्तियार गरेको थियो । यातना दिने क्रममा १४ फागुनमा सनमको मृत्यु भएको थियो ।
अध्यागमन शंकाको घेरामा
विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभागले सामान्य हैसियतका व्यक्ति बारम्बार छोटो अवधिका निम्ति दुबई जाने र फर्किने गर्दासमेत सामान्य शंकाको घेरामा राखेको देखिदैन । जस्तो कि गोरेका सहयोगी टेकराज मल्लले आफु हप्ता–१५ दिनको फरकमा दुबई आउने जाने गरेको बताएका छन् । कतिसम्म भने मल्ल काठमाडौं फर्केको तीन दिन पछि नै पुनस् दुबई गएका छन र १५ दिन पछि फर्के लगत्तै फेरी दुबई पुगेका देखिन्छन् ।
यस्तै प्रवृत्ति अघिल्लो ३३ किलो ५ सय ग्राम संगठित सुन तस्करीको घटनामा पनि देखिएको थियो । अनुसन्धानमा ब्युरोले विष्णुप्रसाद सुवेदी र सन्तोष काफ्लेलाई शंकाको घेरामा राखेको थियो । १७ महिनाको अवधिमा काफ्ले १९ पटक र सुवेदी १ सय ८ पटक काठमाडौं–दुबई आउँजाउँ गरेको तथ्य अनुसन्धानमा खुलेको छ । उक्त घटनामा काफ्ले पक्राउ परे भने सुवेदी फरार छन् ।
को हुन गोरे ?
संगठित सुन तस्करीका मुख्य नाईके भनिएपनि गोरे नामले चिनिने चुडामणि उप्रेती तस्करीको सुनका मुख्य व्यवस्थापक रहेको देखिन्छन् । तस्करीको सुनमा उनको कति लगानी थियो भन्ने खुलेको छैन । अदालतमा पेश गरिएका प्रतिवादीहरुको बयानमा पनि दुबईबाट काठमाडौं सुन ल्याउने र त्यसलाई विभिन्न ठाउँमा पुऱ्याउने कामको मुख्य जिम्मेवारी गोरेले लिएको पाइन्छ ।
तस्करीबाट प्राप्त कमाई उनले जग्गामा लगानी गर्न खोजेको पनि प्रतिवादीहरुको बयानले देखाउँछ । गोरेको समुहमा रहेकाहरुलाई टिकट काटिदिने र यात्राको व्यवस्थापन गरिदिने काममा संग्लन माधव भन्ने मदनप्रसाद घिमिरेले बयानका क्रममा गोरेले ५ महिना अघि मोरङको मधुमल्ला र झापाको दमकमा जग्गा किन्न बैना दिएको बताएका छन् ।
गोरेले तस्करीको संगठित संजालको विस्तारमा प्रहरीका उच्च अधिकारीका अलावा आफ्नै पत्नी, भाई, भाई बुहारी, बाबुलाई समेत उपयोग गरेका छन् । चलाख गोरेले विमानस्थलका कर्मचारीलाई मनग्गे पैसाको लोभ देखाएर तस्करीको सुन ओसारपसारमा प्रयोग गराएका देखिन्छन् । लामो समय दुबई बसेर फर्केका उप्रेतीले नै प्रहरीका उपल्ला अधिकारी र विमानस्थलका कर्मचारीलाई हातमा लिएर संगठित सुन तस्करीको ऱ्याकेट चलाएका देखिन्छन् ।
उनको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको तस्करीको सुन काठमाडौंका र पुर्वी जिल्लाका केही सुन पसलेहरुले खरिद गर्ने र ठुलो परिणाममा उक्त सुन भारतिय बजारमा पुऱ्याउने गरेको देखिन्छ ।
बेलाबखत प्रहरीका निम्ती तस्करीको सुनसम्बन्धी सुराकीको भूमिकामा देखिने गोरेले उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीसँग निकटको सम्बन्ध बिस्तार गरेका थिए । त्यसलाई उनले सुन तस्करीमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।
-कान्तिपुरबाट, जनकराज सापकोटा